ဖား ကန့် ကျောက် စိမ်း လုပ် ကွက် ကမ်း ပါး ပြို မှု ကြောင့် ရဲ တပ် ဖွဲ့ ဝင် ( ၃ ) ဦး နှင့် ကု မ္ပ ဏီ ဝန် ထမ်း ( ၁ ၅ ) ဦး ပါ သွား - Real Gaming
ဖား ကန့် မြို့ နယ် ဆိပ် မူ အုပ် စု ကောင် စံ ကျေး ရွာ ၊ က ရင် ချောင် ကျေး ရွာ ၊ ချောင်း ဖျား ကျေး ရွာ အ နီး က အ မြင့် ပေ တစ် ထောင် ခန့် ရှိ တဲ့ မ နေ့ ည ( ၂ ၈ . ၇ . ၂ ၀ ၁ ၉ နေ့ နံ နက် ၀ ၂ : ၃ ၀ နာ ရီ ခန့် က စိန် လုံ တောင် ကျောက် စိမ်း ကမ်း ပါး ယံ ကြီး ( ဒေ သ အ ခေါ် စိန် လုံ တောင် ကြော ) ပြို ကျ ခဲ့ တယ် လို့ အ နီး အ နား မှာ ရှိ နေ တဲ့ ကျေး ရွာ အုပ် ချုပ် ရေး မှူး တစ် ဦး ထံ က သိ ရ ပါ တယ် ။
အ ဆို ပါ ကမ်း ပါး ပြို ကျ မှု ကြောင့် ရာ ဇ ဌာ နီ ကျောက် စိမ်း တူး ဖော် ရေး ကု မ္မ ဏီ ဝန် ထမ်း ( ၁ ၅ ) ဦး သေ ဆုံး ခဲ့ ပြီး လုပ် ကွက် လုံ ခြုံ ရေး စောင့် ကြပ် တဲ့ ယာ ယီ ရဲ ကင်း တစ် ခု လည်း မြေ ပြို တဲ့ အ ထဲ ပါ သွား ခဲ့ တယ် လို့ လုံ ခြုံ ရေး ရဲ တပ် ရင်း က တာ ဝန် ရှိ သူ တစ် ဦး က ပြော ပါ တယ် ။
” ရဲ တပ် ဖွဲ့ ဝင် ငါး ယောက် ပါ သွား တာ နှစ် ဦး က တော့ အ သက် ရှင် လျှက် ပြန် လွတ် လာ တယ် ။ သုံး ဦး က တော့ သေ ဆုံး တယ် ။ အ လောင်း က တော့ ကျ နော် တို့ ရဲ တပ် ဖွဲ့ ဝင် အ လောင်း တစ် လောင်း ရှာ တွေ့ ပြီ ၊ ကု မ္မ ဏီ လုံ ခြုံ ရေး ဝန် ထမ်း က ( ၁ ၅ ) ဦး ပါ သွား တာ ( ၆ ) လောင်း တော့ ပြန် ရ ပြီ ။ အား လုံး ပေါင်း လော လော ဆယ် ( ၇ ) လောင်း တော့ ရှာ တွေ့ ထား ပြီ ” လို့ ပြို ကျ သွား တဲ့ စိန် လုံ တောင် ကြော အ နီး မှာ တာ ဝန် ထမ်း ဆောင် နေ တဲ့ ရဲ တပ် ရင်း ၃ ၀ က ရဲ မှူး က ပြော ပါ တယ် ။
ဖား ကန့် ကျောက် စိမ်း တွင်း ဒေ သ မြေ ကမ်း ပါး ပြို ကျ မှု ၊ မြေ စာ ပုံ ပြို ကျ မှု ၊ နွံ ကန် ပေါက် ကျ မှု ဖြစ် စဉ် တွေ ထဲ လုံ ခြုံ ရေး ရဲ တပ် ဖွဲ့ ဝင် တွေ ထိ ခိုက် သေ ဆုံး မှု ဆို တာ မ ရှိ ခဲ့ ပါ ဘူး ၊ ယ ခု ဖြစ် စဉ် မှာ လုံ ခြုံ ရေး ရဲ တပ် ဖွဲ့ ဝင် သုံး ဦး ပျောက် ဆုံး နေ ပြီး နှစ် ဦး ဒဏ် ရာ ရ ရှိ ခဲ့ တာ ဟာ ပ ထ မ ဆုံး ဖြစ် တယ် လို့ ဒေ သ ခံ တွေ က ဆို ပါ တယ် ၊ တစ် နိုင် တစ် ပိုင် လက် ကျင်း တူး သူ လူ ပေါင်း များ စွာ သေ ဆုံး နိုင် တယ် လို့ ပြော ဆို နေ ကြ ပေ မဲ့ လော လော ဆယ် အ တည် ပြု ချက် တွေ မ ရ နိုင် သေး ဘူး လို့ ဒေ သ ခံ တွေ က ပြော ဆို နေ ကြ ပါ တယ် ။
” အဲ့ နား မှာ လက် ကျင်း တူး တဲ့ လူ တွေ လည်း ရှိ တယ် နော် ။ အ နည်း ဆုံး တော့ ၁ ၅ ယောက် အ ယောက် နှစ် ဆယ် လောက် တော့ ပါ သွား နိုင် တယ် နော် ” လို့ ဟင်း တင့် ရွာ သား တစ် ဦး က လည်း သူ့ ရဲ့ ထင် မြင် ယူ ဆ ချက် ကို ပြော ဆို ခဲ့ ပါ တယ် ၊ ကမ်း ပါး ပြို ကျ မှု နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ဖား ကန့် ဒေ သ ကို ၂ ၆ . ၇ . ၂ ၀ ၁ ၉ နေ့ က တည်း က ရောက် ရှိ နေ ခဲ့ တဲ့ ပြည် နယ် သ ယံ ဇာ တ ဝန် ကြီး ဦး ဒါ ရှီ လှ ဆိုင်း ကို ဆက် သွယ် ခဲ့ ပေ မဲ့ ဆက် သွယ် မ ရ ခဲ့ ပါ ဘူး ။
မိုး ရာ သီ မှာ မြေ ပြို မှု ကြောင့် လူ အ စု လိုက် အ ပြုံ လိုက် သေ ဆုံး မှု တွေ ကို ကာ ကွယ် တား ဆီး နိုင် ရန် ရည် ရွယ် ပြီး ကျောက် စိမ်း တူး ဖော် ရေး လုပ် ငန်း တွေ ကို ဇူ လိုင် လ တစ် ရက် နေ့ က နေ စက် တင် ဘာ လ ကုန် အ ထိ မိုး တွင်း ကာ လ သုံး လ ကို တ ရား ဝင် ရပ် နား ထား ဖို့ သ ယံ ဇာ တ နှင့် သ ဘာ ဝ ပတ် ဝန်း ကျင် ထိန်း သိမ်း ရေး ဝန် ကြီး ဌာ န မြန် မာ့ ကျောက် မျက် ရ တ နာ ရောင်း ဝယ် ရေး လုပ် ငန်း ( မ က လ ) က ညွှန် ကြား ထား ခဲ့ တဲ့ အ ချိန် လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။
က ချင် ပြည် နယ် သ ယံ ဇာ တ နဲ့ သ ဘာ ဝ ပတ် ဝန်း ကျင် ထိန်း သိမ်း ရေး ဝန် ကြီး ဦး ဒါ ရှီ လှ ဆိုင်း ဟာ လည်း ဖား ကန့် ကျောက် စိမ်း တွင်း ကို ရောက် ရှိ နေ ချိန် လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။
S o u r ce: Zaw M oeH tet